एमसीसी अनुमोदनको षड्यन्त्र र जनप्रतिरोध | Janakhabar
मलेसियाले नेपालीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटायो
विद्युत प्राधिकरणद्वारा इन्टरनेट र केवल टीभीको तार काट्ने चेतावनी
पूर्व जनमुक्ति सेना ‘कपिल’ नेकपामा प्रवेश
मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल (क्रान्तिकारी) रूपन्देहीको अध्यक्षमा प्रदेशी यादव निर्वाचित
अखिल (क्रान्तिकारी)को मुखपत्र ‘कम्युनिस्ट विद्यार्थी’ सार्वजनिक
बञ्चरेडाँडामा तत्काल फोहर व्यवस्थापन नहुने !
अमेरिकाले विकासशील मुलुकलाई थप ५० करोड फाइजर खोप बाँड्ने
राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको अध्यक्षमा वन्त
‘जनमत संग्रह गरे वैज्ञानिक समाजवाद आउने निश्चित ‘
अखिल क्रान्तिकारीको २२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु
शुक्रबार ८ आश्विन २०७८
एमसीसी अनुमोदनको षड्यन्त्र र जनप्रतिरोध
१. एमसीसी विश्वभरि नै विवादास्पद र अलोकप्रिय ः विश्वभरका थुप्रै देशहरुमा एमसीसी विवादित र अलोकप्रिय छ किनकि यो एउटा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो । यही रणनीतिअन्र्तगत भएको यो कुनै निःशर्त सहयोग होइन । हामी सबैलाई थाहा छ, यसमा शर्तैशर्तहरुको चाङ्ग छ । शर्तहरु यस्ता छन् कि जसलाई मान्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हमला हुन्छ । हामी विस्तारै वैधानिक र स्वेच्छिक उपनिवेशतर्फ प्रवेश गर्दछौँ । कुरा स्पस्ट छ– एमसीसी परियोजना हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित छ भने यसलार्ई संसद्बाट पारित गर्नैपर्ने बाध्यता किन ? किनभने बिआरआईलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने त बनेन । त्यसकारण बिआरआई स्वीकार गर्न कुनै विवाद भएन, किनकि त्यहाँ शर्तहरु छैनन् । त्यसकारण बिआरआई कुनै पनि देशमा विवादित बनेन तर एमसीसी सर्वत्र विवादित र अलोकप्रिय बन्यो । कतिपय देश र सरकारले एमसीसीलाई पूर्ण रुपले अस्वीकार गरे । नेपालमा एमसीसी खासगरी सरकारका लागि टाउको दुःखाईको विषय बन्नुको कारण के हो ? धेरै विश्लेषकहरुको आरोप छ, नेपालका धेरै शीर्षनेताहरु कर्मचारी र सञ्चारमाध्यमलाई एमसीसीले पैसा बाँडेको छ । नत्र यत्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयलाई आँखा चिम्लेर एमसीसी चाहिन्छ भन्ने बहस र कुतर्क गर्नुको पछाडिको कारण के हो ? जनताले सडकबाट भनिरहेका छन्– खबरदार नेताहरु ! राष्ट्रघाती एमसीसी अस्वीकार गर । प्रस्तावित एमसीसीविरुद्धको जनविद्रोह बढ्दो र चर्किंदो छ । केपी ओली र शेरबहादुर देउवा एमसीसीका दलालका रुपमा चिरपरिचित छन् । पछिल्लो अवस्थामा एमसीसीको विपक्षमा एमाले र ओली उभिएका छन्, जुन स्वागतयोग्य पनि छ । जनताको चाहना छ– केपी ओली मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा पनि एमसीसीलाई अस्वीकार गर्नेतर्फ लागून् । बाहिर आएअनुसार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पनि एमसीसीलाई रोक्ने मोर्चामा छन् । त्यसकारण देउवा सरकार ठूलो संकटमा छ भन्नेहरुको तर्क पनि जायज छ ।
हामीलाई थाहा छ, अफगानिस्तान घटना पछि विश्वमा दुई धार वा नयाँ शितयुद्ध सशक्त रुपमा विकसित हुँदैछ । अमेरिका विस्तारै पछाडि हट्दैछ अर्थात् अबको विश्व रंगमञ्चमा अमेरिकाको प्रभाव घट्दो छ । अर्को शब्दमा भन्दा अमेरिकाको अहिलेको हस्तक्षेपकारी रणनीतिमा परिवर्तन नभए ऊ अब एक्लिने अवस्थामा पुग्दै छ । यो नयाँ अन्र्तविरोधमा नेपाली जनता सधैँ स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेका छन् । सबैलाई थाहा छ, नेपालमा अमेरिका र भारतबाट सधैँ हस्तक्षेप हुुने गरेको छ । हस्तक्षेपको विरोध गर्दा सुलेमानी बन्नु पर्ला भन्ने चेतावनी पनि यदाकदा नआउने वा नसुनिने होइनन् । हाम्रो परराष्ट्र नीति स्पष्ट हुनुपर्छ कि कुनै पनि शर्तहरुको बोझले थिचिएर आउने सहयोग हाम्रा लागि अस्वीकार्य छ । बृहत् राष्ट्रिय सहमतिद्वारा एउटा नयाँ सन्देश समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिनसके भोलिका लागि पनि सुखद् हुनेछ ।
मेरो विचारमा देउवा, ओली, प्रचण्डलाई एउटा सुनौलो अवसर छ कि एउटा बृहत् राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर एमसीसीजस्ता हस्तक्षेपकारी परियोजनाहरु अस्वीकार गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रतिबद्धतापत्र जसले सबैखाले हस्तक्षेपहरुका बाटोहरु बन्द गरी देओस् । हामीलाई थाहा छ, नेपालमा फेरि अरु दाशढुङ्गा हत्याकाण्ड वा दरबार हत्याकाण्ड दोहोरिनु नपरोस् । सहयोगका नाममा हुने हस्तक्षेप वा उपनिवेशलाई सदासदाको लागि अन्त्य गर्न जरुरी बनेको छ । आज पनि यदि चीनको उदय नभएको भए थुप्रै हत्याकाण्डहरु हुने नै थिए भन्ने तथ्यलाई बुझ्नु पर्छ । कसैले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा काण्डलाई पनि यस्तै घटनासँग जोडेको देखिन्छ । केहीको तर्क छ, यदि एमसीसीलाई रोक्न खोजेमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि अदालतको फैसलामार्फत् जेल जान सक्छन् । कतिपयले त भनेका छन, एमसीसीको पक्षमा नगएमा प्रचण्डको पनि ज्यान सुरक्षित रहने छैन । तर यी सबै तर्क वा पूर्वानुमानहरु कायरतापूर्वक फैलाइएका अफबाह मात्र हुन् ।
२. एमसीसी अनुमोदनको षड्यन्त्र जारी छ र नेताहरुको विश्वसनीयता छैन ः एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने दबाब दिनका लागि नै एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आएकी छिन् । नेपाल आएर उनले दलका नेताहरुलाई दबाब दिएकी छिन् । हामीलाई प्रष्टै छ, नेपालको भूगोलमा एमसीसी पास गराउनु अमेरिकाका लागि अनिवार्य छ । प्रष्टै छ कि अमेरिका सबै हतकण्डा प्रयोग गरेरै भए पनि त्यो अनुमोदन गराउने रणनीतिमा छ । नेपालको जनमत उल्टो छ । अनुमोदनका लागि षड्यन्त्र गर्नकै लागि एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार आएकी हुन् । षड्यन्त्रहरु विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन् । सरकारले पठाएको एमसीसीलाई प्रश्न एउटा गम्भीर षड्यन्त्र हो । यथास्थितिमा एमसीसी पास हुँदैन तर सुधार गरेर पास गर्नुपर्छ भन्नेहरुको षड्यन्त्र गम्भीर र रहस्यपूर्ण छ । एमाले, माके, एसजस्ता सबै दलहरु परिमार्जनसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने अडानमा छन् । जनआक्रोशलाई मत्थर पार्ने वा जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने उद्देश्यले नै परिमार्जनको मुद्दा उठाइएको हो भन्ने स्पष्ट छ । फेरि पनि परिमार्जनको मुद्दाले स्पष्ट गर्दछ कि षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धतामा सहीछाप गरिसकेका छन् । षड्यन्त्र अर्को पनि छ, एमसीसीको अनुमोदन गर्ने गरी देउवा र ओलीको नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्न सक्ने आँकलन वा सम्भावना पनि छ । अर्को षड्यन्त्र छ, अन्तत्वगत्वा वर्गमान सत्ता गठनबन्धनले एकमनका साथ अनुमोदन गर्ने छ । यसबाट देखिन्छ कि एमसीसी अनुमोदनका लागि धेरै खाले षड्यन्त्र र अभ्यासहरु भइरहेका छन् । अहिलेसम्मको तस्बीर हेर्दा सामान्य ढंगले एमसीसी पारित हुने अवस्था छैन किनकि जनता यसको विपक्षमा छन् । सबै दलभित्र एमसीसी पक्षधरहरु अल्पमतमा छन् । नेपाली काँग्रेसमा समेत एमसीसी अस्वीकार्य बन्ने अवस्था बन्दै छ । मेरो विचारमा संसदीय दलहरुले परिमार्जनको नाटक गर्नेछन् । अमेरिका जसरी पनि नेपालमा एमसीसी लागू गर्नुपर्ने परिस्थितिमा भएकोले अन्तत्वगत्वा परिमार्जनको लागि तयार हुने नै देखिन्छ । तर, हाम्रा नेताहरु बिकाउ र आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका भएको हुनाले यथास्थितिमा पनि अनुमोदन नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।
३. सत्तासग राष्ट्रियता साट्ने प्रवृत्ति ः नेपालका संसदीय नेताहरुमा एउटै र समान प्रवृत्ति छ, त्यो हो आत्मसमर्पणवादी मनोवृत्ति । त्यसकारण आमनेपाली जनताको एउटै बुझाइ छ– नेपालमा एउटा पनि राष्ट्रवादी र राजनेता जन्मिन सकेन । हाम्रा नेताहरु सत्तासँग राष्ट्रियता साट्न तयार हुन्छन् । गायक तथा गीतकार शिशिर योगीको शब्द सही छ– म यो देशमा एउटा नायक खोजी रहेछु । हामीले देख्यौं नि त कोशी, गण्डकी, महाकालीजस्ता सम्झौता सत्तासँग साटिएका हुन् । पछि गएर जनमुक्ति सेना, हतियार अनि जनयुद्धलाई पनि सत्तासँगै साटिएका हुन् । परिणामस्वरुप हामी जति अगाडि गयौं भने पनि २०४६÷०४७ कै वरिपरि घुमिरहेकै छौं । हामीले एउटा राजा फालेर सयौं राजा बनाउने व्यवस्थामा गयौं । गणतन्त्र भन्दै संसदीय व्यवस्थामा गयौं । त्यसकारण जब राष्ट्रियताको बहस वा विवाद चर्किन्छ सँगसँगै सत्ताको कृत्रिम बहस पनि उत्पन्न गरिन्छ । जस्तो आज एमसीसीको विवाद चर्किँदै जाँदा नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा चलाइएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चाले माके वा प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी वा माधव नेपाललाई दबाब दिन्छ । बरु एमसीसी पास गरेरै भए पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन टिकाउनु पर्ने बाध्यतामा छ प्रचण्ड–नेपाल समूह । उता ओलीको रणनीति छ, प्रचण्ड–नेपाल तयार नभए देउवालाई साथ दिने अनि गठबन्धन एकमत भए विपक्षमा जाने । त्यसकारण नेपालको सत्ताको चाबी विदेशीहरुमा छ भन्ने तथ्य स्पष्टै छ । कतिपय विश्लेषकहरुले भनिसकेका छन् कि एमसीसीबाट खाएको पैसाका कारण यो अनुुमोदनका लागि दलहरु र शीर्ष नेताहरु बाध्य छन् । हामीलाई थाहा छ, वर्तमान संसदीय सत्ताका नाइकेहरु हुन्– शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । यी तीन नेताको कुरा मिल्यो भने सबैको कुरा मिलिहाल्छ र संसदमा सर्वसम्मत हुन्छ ।
त्यस्तै परे बहुमत होइन दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुुमोदन हुन बेर लाग्दैन् । त्यसकारण बाहिर एउटा र भित्र अर्कै षड्यन्त्र गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेताहरुको विश्वसनीयता छैन । जनमुक्ति सेनाको विघटन पनि झुुक्याएरै भएको थियो । आजका संसदीय नेताहरुमा कुर्सी नै मुुख्य सिद्धान्त छ । कुर्सीबिना त एकछिन पनि बाँच्न नसक्ने रोग लागेको छ । आजसम्मका अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने केही सानाबाहेक सबै संसदीय दलहरु एमसीसी भित्र्याउन एकमत छन् । थोरै दायाँ–बायाँ गरे नयाँ सत्ता गठबन्धनको हतियार तयारी अवस्थामा छ । धेरै सांसदहरुको चिन्ता मन्त्रिमण्डल विस्तारसँग जोडिएको छ । देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच गठबन्धन बनाउने पूर्वसन्ध्यामा नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने सहमति भइसकेका भन्ने समाचार पनि साक्षी छन् । यदि दाहाल र नेपाल तयार नभए ओली र देउवाको समीकरण बन्ने सम्भावना पनि छ । जसरी हुन्छ एमसीसी पारित गर्ने रणनीतिमा थोरै षड्यन्त्रहरु भएको दृश्यहरु प्रष्ट नै छन् ।
४. राष्ट्रवादी धुु्रवीकरणको अपरिहार्यता ः कम्तीमा एउटा विशाल राष्ट्रवादी धुव्रीकरणको आवश्यकता बढेको छ । विभिन्न नाममा जनताहरु सडकमा निस्किएका छन् तर एउटा राष्ट्रवादी मूलधार निर्माणको अपरिहार्यता बढेको छ । राष्ट्रवादी शक्ति र समूहहरु एकीकृत र संगठित रुपमा आउनुुपर्छ । सबै क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरु एकताबद्ध भई राष्ट्रवादी मूलधारको निर्माण गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । यदि त्यस्तो धारको विकास हुन नसकेमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेताहहरु उही रहने अवस्था कायम रहन्छ । व्यवस्था पनि केवल ब्यानरमा फेरिने दुर्दशा दोहोरिने नजिर बनिसक्यो । त्यसकारण अब नयाँ ढंगले राष्ट्रवादी धु्रवीकरण नभएमा देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने निश्चित छ । फेरि पनि भनौं – एमसीसी खारेज गर ।
संसदीय निर्वाचन होइन जनमत संग्रह
नेपालका कम्युनिस्ट आवरणका नेताहरुले कमरेड गोञ्जालोबाट सिक्नु पर्ने पाठ
स्वाधीनता, शान्ति, सद्भाव र सम्बृध्दि दिन असमर्थ बन्दैछ संबिधान
नव सामन्तहरुको नेतृत्वमा सर्वहारा वर्गको राजनीति
२०७८ भाद्र ३० गते, बुधबार